Paris Saint-Germain oo iska diiday dalab ku aaddan Neymar Jr oo ay ka heshay kooxda Juventus – Gool FM
(Paris) 06 Sebt 2019. Kooxda Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay diiday dalab uga yimid kooxda Juventus oo ku aaddan saxiixa Neymar, isla markaana uu ku lug lahaan lahaa ciyaariyahan Paulo Dybala suuqa xagaagan.
Neymar oo ah xiddiga ugu qaalisan kubadda cagta dhanka suuqa kaas oo PSG ugu biiray lacag rikoorkii adduunka oo gaareysa 198 milyan oo gini sanadkii 2017 ayaa si xamaasad leh u qarxiyay hadalka xiiso galiyay kooxo badan kaddib markii uu sheegay inuu ka dhaqaaqayo garoonka Parc des Princes inta uu furanaa suuqii kala iibsiga ee dhowaan xirmay.
Kooxdiisii hore ee Barcelona waxay si adag uga shaqeysay inay dhammeystirto heshiiska ciyaaryahanka reer Brazil, laakiin ma jirin wax tallaabo ah oo laga qaaday, iyadoo PSG ay diiday inay ku soo iibsato 200 milyan oo gini.
Sida laga soo xigtay Jariiradda The Mirror, Juventus ayaa u dhaqaaqday saxiixa Neymar Jr iyadoo la soo diiday dalab ku kacaya 100 milyan oo gini oo lagu daray adeegga Dybala.
Neymar ayaa xiriirkii uu la lahaa PSG ay dhibaato aad u xun soo food-saartay, waxaana la dareemaayay in kooxda reer France iyo xiddiga reer Barzil aysan sii wada shaqeyn doonin, balse hadda wax walba ayaa u muuqanaya in la xaliyay.
Wararka ayaa soo jeedinaya in Barcelona ay qorshayn kale u sameyn doonto xagaaga soo aaddan saxiixa Neymar, kaasoo ay u arkaan saxiix istiraatiijiyadeed oo muhiim u ah kooxdooda.
Si kastaba ha ahaatee, naadiga PSG ayaa ku guuleysatay in xiddigeeda qaaliga ah ay sii xafidato xilli ay adeeggiisa kuwada tartamayeen kooxo badan oo lacago fara badan diyaar la’ahaa si ay u helaan boqor yaraha reer Brazil.
Ciyaartoyda u sharraxan abaal-marinta xiddiga bisha Agoosto ee Premier League oo la shaaciyey... (Man City oo saddex laacib ku leh)
Dani Ceballos oo aysan u badnayn inuu sii joogo kooxda Arsenal... (Maxaa jira?)